မိခင်ဟူသည် . . . | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 08/05/2014
ရှေးဦးစွာ Happy Mother day လို့ နှုတ်ခွန်း ဆက်သလိုက် ပါတယ်။ အမေများအားလုံး ဘုရားရှင်ထံပါးမှ ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ်တို့ အတွက် လိုအပ်သော ကောင်းကြီးများ ရရှိ ခံစားကြပါစေ။ အမျိုးသမီး တိုင်းသည် ဇနီးသည်ဖြစ် ရသော အခွင့်ကိုယ်စီရှိ ကြသည်။ သို့သော်လည်း ဇနီးသည်တိုင်းသည် မိခင်ဖြစ်ရသောအခွင့်ထူးကိုမူ လူတိုင်း မရရှိနိုင် ကြပေ။ ဤထူးမြတ်သော အခွင့်ထူးကို ရရှိပိုင်ဆိုင် ထားကြသော မိခင်များ အသက်တာအတွက် ဘုရားသခင်ကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်မိသည်။
အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မိခင်များ၏အသက်တာ သည် ခင်ပွန်းသည်များအတွက်သော်၎င်းင်း၊ သား သမီးများအတွက်သော်၎င်းင်း ခန္ဓာ၊ စိတ်၊ ၀ိညာဉ် (၃)ပါး၏ လိုအပ်ချက် ကို အစဉ်ဖြည့်ဆည်းပေးနေ ကြရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏မိခင်သည် သူမ၏ ကလေး များနှင့် ခင်ပွန်းသည်အတွက် မိမိကိုဘုရားသခင် ပေးအပ်ထားသောတာဝန်ဟုခံယူပြီး အလွန်ပင် တာဝန်ကျေပြွန်စွာ သက်ဆုံးတိုင် မညည်းမညူဘဲ အနစ်နာခံ အသက်ရှင် လုပ်ဆောင် သွားခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ခင်ပွန်းသည်နှင့် သားသမီးများအ တွက်သစ္စာ ရှိစွာ မပျက်မကွက်ဆုတောင်းပေး ခဲ့ပါသည်။ သူမ၏ ခံယူချက် သဘောထား ကိုလည်း သားသမီးများအား ပြောပြသွန်သင်ခဲ့ပါသည်။
“မင်းတို့လေးတွေကို ဘုရားသခင်ကငါ့ကို အပ် ထားတာဖြစ်တယ်၊ မင်းတို့အားလုံးကိုငါချစ်တယ်၊ ငါ့ထက်ဘုရားသခင်က ပိုပြီးချစ်တယ်၊ မင်းတို့အား လုံးကို ငါဂရုစိုက်တယ်၊ ငါ့ထက်ဘုရားသခင်က ပို ပြီးတော့တောင် ဂရုစိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့် မင်းတို့ကို ငါချစ်တာထက် ပိုချစ်ပြီး၊ ငါဂရုစိုက်တာထက်ပို ဂရုစိုက်တဲ့ ဘုရားသခင်ကို ငါ့ထက်ပိုပြီးချစ်ပါ။ ဘာ လို့လဲဆိုတော့ မင်း တို့လေးတွေကို သူပိုင်တယ်၊ ငါ ကဆိုင်ပဲဆိုင်တယ်လေ” လို့ ကျွန်တော်တို့တွေကို အသိပေး ဆုံးမခဲ့တာကို ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ခဲ့ပါ။
ကျွန်တော့်လိုပဲ အခြားသော သူများရဲ့ အသက် တာ မှာလည်း သူတို့နဲ့ သက်ဆိုင် ခဲ့ရတဲ့ မိခင်များရဲ့ ကောင်းမြတ်မှုများ ဝေငှသက်သေခံ ထားတာကို ခံစားကြည့်ကြပါစို့။
လူငယ်လေး တစ်ဦး..နာမည်ကတော့ W.P.L Mackay ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာအသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်မှာ တက်္ကသိုလ်တက်ဖို့ အိမ်ကနေ ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိခင်က နှုတ်ကပတ် တော် တစ်ပိုဒ်နဲ့ အတူ သူ့ နာမည်ထိုးထားတဲ့ သမ္မာ ကျမ်းစာအုပ်ကိုပေး လိုက်တယ်။ တက္ကသိုလ် ရောက်တဲ့အခါ သူဟာ ဘ၀ကို ရေစုန်မျောပြီး အ ပျော် လွန်ကာ မိခင်ပေးလိုက် တဲ့သမ္မာကျမ်းစာ ကို အရက်နဲ့ လဲပြီးသောက်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိခင် ကတော့ အသက်တာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဒီသားအတွက် ဆုတောင်းပေး ခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံး မှာ W.P.L Mackay ဟာ ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တစ်နေ့ ဆေးရုံတွင် တာဝန်ထမ်း ဆောင်နေချိန်မှာ ရောဂါ အတော်ကျွမ်းနေပြီဖြစ် တဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီလူနာ ဟာ သူ့ရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲ တောင်းနေတာကိုလည်း သူကြားခဲ့ရတယ်။ မကြာခင် ရက်အနည်းငယ် အတွင်းမှာပဲ အဲဒီလူနာဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။ Mackay ဟာ အဲဒီလူနာက သူ့ ဘ၀အတွက် အတော်အရေးထား၊ တန်ဖိုးထားတဲ့ စာအုပ်ဟာ ဘာစာအုပ်လဲဆိုတာကို သိချင်တာ နဲ့လူနာနေခဲ့တဲ့ အခန်းမှာသွားရှာ ခဲ့တယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ကို သူတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ သူအင်မတန် မှအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်က တော့ သူကိုယ်တိုင် အရက်နဲ့ လဲ သောက်ခဲ့တဲ့ မိခင် ပေးထားခဲ့တဲ့၊ သူ့နာမည်ထိုးထားတဲ့ “သမ္မာကျမ်း စာအုပ်” ဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ သူဟာ သမ္မာ ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ သူ့မိခင် လိုင်းတားထားတဲ့ ကျမ်း ပိုဒ်များကို အချိန်အတော်ကြာ ဖတ်ရှုဆင် ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတဲ့နောက် ဘုရားသခင်ထံ ၀န်ချ တောင်းပန် ဆုပဌနာပြု လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန် ကစပြီး သူဟာ ဆရာဝန် ဘ၀ကနေ ဘုရားသခင် အတွက် အမှုတော်ဆောင် တစ်ယောက်ဖြစ် လာ ပါတယ်။ တစ်ချိန်က သူတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့သမ္မာ ကျမ်းစာဟာ အခုတော့ သူ့ဘ၀အတွက် မရှိမဖြစ် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့မိခင်လည်း ကျွန်တော့်အတွက် သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန် အထိ ဘုရားသခင်ထံမှာ ဆု တောင်း ဆက်ကပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ဆုတောင်း ချက်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်နဲ့ အညီဖြစ်ခဲ့ ပါ တယ်။ မိခင်ဆုံးပါးပြီး (၃)နှစ်အကြာမှာ မိခင်ဆု တောင်းခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဘုရားသခင်ဟာ ကျွန်တော့် ကို အမှုတော်ဆောင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရွေး ကောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မိခင်များဟာ ဘုရားသခင်နဲ့ အတူ သားသမီးများရဲ့အသက်တာမှာ ဘုရားဘုန်း ထင်ရှားဖို့အတွက် လက်တွဲလုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သာသနာ့ လုပ်ဖော်ဆောင် ဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးတွေကိုပြုစု ပျိုးထောင်တဲ့အခါ ခန္ဓာပိုင်း၊ စိတ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ အရေးကြီးတာထက် ထာဝရကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘုရားကို သိကျွမ်း ခြင်းဖြင့် အသက်တာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ရန် အင်မတန် မှအရေးကြီးတာပါတယ်။
ယုံကြည်သူမိခင်အ ယောက်စီတိုင်းအနေဖြင့် မိမိတို့ရဲ့သားသမီးများ ဘုရားသခင်၌ကိုးစားခြင်း၊ သိကျွမ်းခြင်းအရာမှာ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ သွန်သင် ပြီးသစ္စာရှိစွာ ဆက်ကပ်ဆုတောင်းပေးခြင်းဖြင့် သားသမီးတွေရဲ့အသက်တာမှာ ဘုရားရဲ့မေတ္တာ၊ အလင်းတရား၊ ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူးတွေကို ရရှိခံစားနိုင်စေရန် ဘုရားသခင် ပေးထားသော တာဝန်ကိုသက်ဆုံးတိုင် ဆက်ကပ်လုပ်ဆောင်သွား ကြပါလို့ တိုက်တွန်း နိုးဆော်လိုက်ပါရစေ . . . .။
၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလထုပ် စိန်ခေါ်သံမဂ္ဂဇင်းမှ ဆရာ ပေါဇံ၏ ရေးသားချက်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်။
← ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင် ဖော်ပြသော ခရစ်တော်ပြုလုပ်ခဲ့သည် နိမိတ်လက္ခဏာများ
One comment on “မိခင်ဟူသည် . . .”
myi tungmyosan11 on 09/12/2014 at 9:47 PM said: